Hop (2011) – Gold Channel Movies
Easter ပွဲတော်ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာသိပ်မသိကြပေမယ့် Easter ဟာခရစ်ဟန်လူမျိုးတွေအတွက် ကြီးကျယ်တဲ့Holidayတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Easter morningရောက်ပြီဆိုရင် Easter Bunny လေးတွေက ချော့ကလက်လေးတွေ ကြက်ဥပြုတ်လေးတွေပေါ်မှာပုံဆွဲပြီး ကလေးတွေလိုက်ရှာဖို့အတွက် တစ်အိမ်လုံးပတ်ပြီးဝှက်ကြတယ်လို့တော့ သိထားကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။
Hop ရုပ်ရှင်ဟာ Easter ကိုအခြေပြုပြီးရိုက်ထားတဲ့က‌ေလးကြိုက်ကာတွန်းလို့‌ေပြာပေမယ့် တကယ့်ကို လေးနက်တဲ့ရုပ်ရှင်တစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။
Whatever you are, don’t give up on your dreams. Nothing is impossible. စတဲ့ moral လေးတွေကို ဟာသလေးတွေနဲ့ရောပြီး ဖော်ပြသွားတာဟာ ကလေးရောလူကြီးပါ motivated ဖြစ်စေပါတယ်။
Hop ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုတော့ personally recommend လုပ်ချင်ပါတယ်။ ငယ်ငယ်ထဲကကြည့်ခဲ့ပေမယ့် ဘယ်အရွယ်ရောက်ရောက် ဘယ်အချိန်ပြန်ကြည့်ကြည့် ရိုးမသွား ပျင်းမသွားတဲ့ရုပ်ရှင်ပဲမို့ ရုပ်ရှင်ကြိုက်တဲ့ movie lovers တွေကိုလည်း ဒီဇာတ်ကားကိုကြည့်ဖို့ suggestလုပ်ပါတယ်။
Review and Translated by Lucy May
IMDb Rating 5.4 33,086 votes
TMDb Rating 5.7 958 votes
Download Mega HD 720p Myanmar 970 mb
Download Mediafire SD 480p Myanmar 350 mb
Download Mediafire HD 720p Myanmar 970 mb
Download Yandex HD 720p Myanmar 970 mb
Download G Drive HD 720p Myanmar 970 mb